Manicaland Yogadzira Chipatara Chekurapa Coronavirus
Kubvumbi 20, 2020
Vamwe vagari vakawanda vemuManicaland vari kuchema chemawo kuti nzara ndiyo yave kuvavhiringidza zvakanyanya mushure mekunge mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakurudzira kuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus kwemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa 3 Chivabvu.
Kuchema uku kuri kuitwa hako kunyangwe dunhu reManicaland iri risati rave nezvipatara zvekuti vanenge varwara necoronavirus varapwe.
Bazi rezvehutano rakazivisa neMuvhuro kuti mumwe munhu akabatwa nechirwere checoronavirus akanzi ari kuManicaland ari muHarare uye haana kumboenda kudunhu iri kubva zvaadzoka kuBritain.
Munhu uyu anonzi hake akanyoresa kuti imba yake iri kuManicaland asi nekuti ari kurapirwa muHarare ave kuiswa pavarwere vari muHarare kwete kuManicaland.
Imwe kurudziro kubva kubazi reUnited Nations reWorld Health Organization rekuti nyika itange mabhizimisi mushure mekuwirwa nechirwere checoronavirus ndeyekuti ivewo nezvipatara zvakawanda mumatunhu ose zvinorapa chirwere ichi. Asi muManicaland nemamwe matunhu, hurongwa uhu hausati hwanyatsopera.
Chiremba wekanzuru yeguta reMutare Dr Antony Mutara vanoti nzvimbo inochengetedzwa vanorwara nechirwere cheCOVID-19 yeMutare Infectious District Hospital yave pachidanho chepamusorosoro sezvo vakawana mari kubva kuhurumende nemwme makambani. Chipatara ichi chine mipanda mina. Dr Mutaravatendawo kuti munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi aine kero yeManicaland ari kuHarare.
Chiremba ava vakurudzirawo vanhu kuti vateerere kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba.
Asi vamwe vagary vakaita saVaElton Banda mugari wemaMutare kuChikanga vanoti kuwedzerwa kwemamwe mazuva kuri kukonzera kuti vanonge svosve nemuromo.
Mashoko aya atsinhirwawo navaVaChengetai Hove vanoti vave kutodya chikafu china kana Mafuta nekuti Havana kana pekutangira.
Mumwewo mugari wemaMutare kuDangamvura VaReuben Rukono vanoti pamazuva akanga akatarwa akapera vazhinji vasisina chekubata.
Amai Lilian Musekiwa avo vanoita basa rekutengesa mumusha weDestiny maMutare vanoti vapererwa nemazano nezvakataurwa.
Asi mumwe mugari wemumusha weHobhouse Muzvare Jayden Moyo vanoti hurumende yatora danho rakanakira vanhu sezvo hutano huchifanirwa kukosheswa pane zvimwe zvinhu.
Vanhu vazhinji kuno kwaMutare vari kugara mudzimba kunyangwe vachinyunyuta nedanho iri ukuwo mapurisa nemasoja vachionekwa nguva nenguva munzvimbo dzakasiyana siyana kunogara vanhu uye nemuguta.
Vari kufamba kupinda muguta vanosungirwa kunge vaine tsamba dzinotsanangura izvi uye vange vari vemabasa akakoshesa akaita sevashandi vehurumende, vemapazi ehutano, mapurisa, mauto nevamwewo.
Zvitoro zvizhinji zvakavhara misuwo kuvatengi kunyanya zvinotengesa zvinhu zvisiri zvekudya muguta uye nekunogara veruzhinji. Mabhanga akavharawo pamwechete nenzvimbo dzekutandarira.
Vane mabhizinesi akavhura vanosungirwa zvakare kuvhara misuwo nenguva dzetatu masikati uye vatengi vachifanirwa kunge vakamira chinhanho chemita imwechete kubva pane mumwe iya inonzi social distancing kuyedza kudzivirira kutapurirana chirwere dzeCOVID-19.